Intlanzi yaManzi aManzi eTropiki kunye neLoqondo labo lokuFudumala | Ngeentlanzi
Ekuqaleni, iintlanzi zisenokubonakala ngathi zizilwanyana ezinenkathalo nokugcinwa kwazo kungadinisi kakhulu. Ngandlela thile kunjalo, nangona kunjalo kufuneka sithathele ingqalelo uluhlu lwemiyalelo efanelekileyo ukuba sifuna i-aquarium yethu ibe yindawo efanelekileyo. Esinye sezi zivakalisi zibalulekileyo asiyiyo enye lobushushu.
Kuxhomekeka kuhlobo okanye iintlobo zeentlanzi esinazo, iimeko zokufudumeza ekufuneka zikwazi ukuqhuba ubomi kwiimeko ezifanelekileyo zahluke kakhulu. Into ephambili esebenza njengejaji ngokungathandabuzekiyo yindawo yemvelaphi. Iqondo lobushushu alifani kwiintlanzi ezinemvelaphi yetropiki njengoko kunjalo ngeentlanzi zamanzi abandayo.
Kule nqaku siza kugxila ngokukodwa kwiimeko zeqondo lokushisa ezithandwa kakhulu intlanzi yetropiki yasemanzini. Siza kuwacacisa la maqondo obushushu kwaye siya kukubonelela ngeengcebiso kunye neemveliso kwintengiso ukuze uzilawule.
1 Leliphi iqondo lobushushu elifanelekileyo kwintlanzi yetropiki?
2 Iingcebiso zokugcina nokulawula ubushushu
3 Iimveliso zentengiso yolawulo lobushushu
5 Iintlanzi zaseTropiki
5.5 Intlanzi yomnyama
Leliphi iqondo lobushushu elifanelekileyo kwintlanzi yetropiki?
Enkosi ngemibala eyahlukeneyo, ukumila kwayo, kwaye ekugqibeleni, inkangeleko yazo eyahlukileyo, iintlanzi ezikweleenjiko zezona ntlobo zininzi zeentlanzi kumachibi okudada, iilwandlekazi kunye namachibi kwihlabathi liphela. Ziintlanzi ezingadingi kunikwa ngqwalaselo ikhethekileyo, nangona kunjalo ukuzigcina kubushushu obufanelekileyo kuyabaluleka.
Ezi zilwanyana ziyakwazi ukusebenza ngokulula kwindalo kunye neqondo lobushushu isusela kuma-21 ukuya kuma-29 degrees Celsius, elonaqondo lobushushu ngqo lelona lijikeleze i25 degrees centigrade. Nangona kukho nabakhuseli abathi eyona nto ilungileyo kukuba amanzi ahlala kuma-27 degrees celcius. Kwilizwe leentlanzi, kwenzeka ntoni kwezinye izinto ezininzi zobomi, ukuba "utitshala ngamnye unencwadana yakhe."
Esinye sezihlobo zabo ezisondeleyo, iintlanzi ze-cichlid, zikhetha iqondo lobushushu bamanzi ukuba libe ngaphezulu kancinci: malunga nama-28 degrees celcius. Kungenxa yokuba azalelwe emanzini ashushu eAmazon.
Le meko yahlukile, kwaye ngayiphi indlela, naleyo yafunyanwa ngamanye amaqhawe aphambili e-aquariums: intlanzi ebizwa ngokuba yi "Goldfish", ezinokuchazwa kwangaphambili kwemeko zasemanzini ezinobushushu obuhlala buzinzile phakathi I-15 kunye ne-20 degrees centigrade.
Kufuneka iqatshelwe into yokuba ukuba amanzi ezihlala kuwo iintlanzi acocekile kwaye ukutya esikunika kona kwanele kangangoko, banokuziqhelanisa namaqondo asezantsi asezantsi.
Iingcebiso zokugcina nokulawula ubushushu
Xa kuziwa ekugcineni nasekulawuleni iqondo lobushushu kwiindawo zethu zasemanzini nakwiitanki zentlanzi, okanye kuzo zonke ezo ndawo siguqukele kuzo njengendawo yokuhlala iintlanzi zethu, zininzi iindlela. Nganye kuzo ineempawu zayo ezinokuba luncedo ngakumbi okanye ngaphantsi kuthi, ke kufuneka sithathe ezona zilungele thina. Nantsi eminye imizekelo.
Okokuqala, kwaye mhlawumbi le yeyona ndlela ilula kwaye isasazeke kakhulu yokulawula ubushushu, nokuba kunjalo ukusetyenziswa kwethemometha. Ezi zixhobo ziya kusinika ulwazi oluqhubekayo noluchanekileyo kubushushu bamanzi, into enomdla kakhulu kuthi kuba ngawo onke amaxesha siyazazi iimeko ezikuyo iintlanzi zethu. Lumka, Masingenzi impazamo yokuqhelanisa okanye ukucwangcisa ezi thermometers ukuya kwimithombo yobushushu njengokukhanya kwelanga okanye isibane, kuba olu lwazi luya kugqwetha kakhulu.
Kwelinye icala, enye indlela enamandla okhethekileyo xa kuziwa kulawulo lobushushu bamanzi Izifudumezi. Ezi zixhobo zisinceda ukuba siphakamise iqondo apho i-aquarium yethu ikhoyo, ukunyusa ubushushu bayo ngokukhupha ubushushu. Oku kuphuma kobushushu kuyahlengahlengiswa kwaye kulawulwe, ukongeza kwimeko yayo ngenani leelitha zamanzi ezisebenza kuwo.
Esinye isimo sengqondo esibi abantu abaninzi abafuna ukwandisa ubushushu be-aquarium yabo okanye itanki yeentlanzi bahlala beziqhelanisa nokubonisa ezi zikhongozelo, kunye neentlanzi, elangeni. Oku akusebenzi kwaphela, kuba akusizuzi kwinjongo zethu zokugcina ubushushu obuzinzileyo, kwaye inokuba sisiseko kunye nesizathu sezinye iingxaki ezinje ngokubonakala, emva kwenyani, yobulembu emanzini .
Iimveliso zentengiso yolawulo lobushushu
Ngokubhekisele koku kukhankanywe ngasentla kwicandelo elidlulileyo, ukuba siyayilandela imakethi siya kungqina uluhlu olubanzi kunye nolutyebileyo lweemveliso, ngakumbi iithemomitha kunye nezifudumezi, ukulawula nokulinganisa amanzi kwi-aquariums nakwiitanki zentlanzi.
Ukuququzelela umsebenzi wakho wokukhangela, kwaye ngeso sizathu ukuze usebenze njengengcebiso, sithathe inkathazo yokuveza ngezantsi kweemveliso esizibona njengelona xabiso liphezulu lemali kulo msebenzi. Zonke zinokufumaneka kwiqonga lokuthengisa elikwi-Intanethi AMAZON, yaziwa kakuhle kwaye iyakwenza ukuba inkqubo yokuthenga ilula kakhulu.
I-thermometer yedijithali yeFaburo LCD. Ilungele ukusetyenziswa kwii-aquariums. Inentambo ye-98 cm ende ebonelela ngaphezulu kwesithuba esaneleyo phakathi kweprowuzo yokuntywilisela kunye nescreen sayo seLCD. Igqunywe ngento engavumeli ukufuma ukuba kudibane nezinto zombane. Inebhetri eyi-1.5 V. Ixabiso layo lingaphezulu kokufikelelekayo, kuba lixabisa kuphela 7,09 euro y ungayithenga Apha.
I-Digital Aquarium Thermometer enesiboniso se-LCD Terrarium. Isisiseko ngakumbi kunethemometha yangaphambili yedijithali, kodwa inempawu ezifanayo kakhulu kwaye nexabiso layo ngokucacileyo liphantsi: kuphela 2,52 euro. Thenga apha
I-BPS (R) Isifudumezi Samanzi Itanki Esifudumeleyo se-200W, 31.5 '' ene-BPS-6054 ye-thermometer yedijithali. Esi sixhobo siyindibaniselwano efanelekileyo yesifudumezi kunye nethemometha ngaxeshanye. Yenzelwe ii-aquariums ezinomthamo ophakathi kwe-100 kunye ne-200 yeelitha. Ineekomityi zokutsala ezinokuzilungisa kwiindonga ze-aquarium kwaye iyacetyiswa kakhulu, ngokuchanekileyo, kwiintlanzi zamanzi ashushu. Kufuneka ikhankanywe ukuba, ngokufanelekileyo, iyangena. Ukuba unomdla, Apha ungayithenga.
Nje ukuba uneentlanzi kwi-aquarium njengenxalenye yendalo ozihlanganisile, akufuneki uyeke ukulandela ubushushu be-aquarium koku kufuneka yiba nethemometha eza kuyilinganisa rhoqo. Kukho ezihambelana neglasi ye-aquarium kwaye zinike ukufundwa ngokuchanekileyo. Kufuneka ugcine engqondweni ukuba ayivelwanga lilanga, kuba inokulinganisa ubushushu bamanzi.
Ukugcina ubushushu obulungileyo, kuya kufuneka usebenzise i-heater ekhethekileyo ye-aquariums efakwe emanzini. Ubungakanani bobushushu obukhutshwa zizifudumezi bunokulawulwa kwaye buhamba ngokunxulumene iilitha eziqulathwe yi-aquarium.
Kuyacetyiswa musa ukubeka i-aquarium elangeni ukufudumeza amanzi, Kuyinkolelo ukuba iyajikeleza kodwa ayisiyonyani, ayisiyondlela efanelekileyo yokugcina ubushushu obufanelekileyo, kuba kukho umngcipheko wokuba kushushu kakhulu okanye kungazinzi. Indlela yokugcina i-aquarium yentlanzi yetropiki enendawo yokuhlala efanelekileyo kukusoloko unamanzi acacileyo kwaye thintela ukukhula kwe-algae.
Siyathemba ukuba sikuncedile ngeli nqaku kwaye sikwazile ukucacisa amathandabuzo awahlukeneyo malunga ne iintlanzi ezikweleenjiko kunye neqondo lobushushu ekufuneka zihlala kulo, kwaye zeziphi iindlela ezahlukeneyo zokukufezekisa.
Nje ukuba sibe nobushushu obulungele iintlanzi zethu, kuya kufuneka sibone ukuba zeziphi ezifanelekileyo ukuhlala kunye. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba iintlobo ezininzi zeentlanzi zetropiki zisenokungadityaniswa kakuhle., kuba banommandla omkhulu okanye banengcwangu kunye nezinye iintlobo.
Ukuseta i-aquarium esebenzayo ngokufanelekileyo, kufuneka siqale siqinisekise ukungqinelana kweentlanzi zethu. Enye into ebalulekileyo ekufuneka uyihoye xa useta i-aquarium kunye nentlanzi yetropiki yipH yamanzi. Uhlobo ngalunye lweentlanzi lune-pH yalo apho lunokuhlala khona ngendlela esempilweni. Ngokubanzi, Iintlanzi zihlala kwisikhokelo esiphakathi ko-5.5 no-8.
Phakathi kweyona ntlanzi ifanelekileyo yokuloba iintlanzi kwi-aquarium yethu sifumana:
Ezi ntlanzi zetropiki zidume kakhulu ngemibala yazo ebabazekayo nangokulula kwazo xa kufikwa ekubanyamekeleni. Ayiniki ngxaki ngokondla, ukusukela oko Benza omnivorous. Ungayondla le ntlanzi ngezikali ezomileyo, ukutya okubandayo, izikali, izinti, njl.
Olunye uhlobo lweentlanzi ekulula kakhulu ukulukhathalela, kuba inelungu elilivumela ukuba liphefumle ioksijini esemoyeni. Ingxaki enokubangela nezinye iintlanzi kukuba yindawo enkulu kakhuluKe kuyacetyiswa ukuba ubuze evenkileni ukuba yeyiphi na intlanzi ehambelana kakhulu nayo okanye ubenentlanzi enye kuphela yolu hlobo kwi-aquarium.
Zizona ntlanzi zinemibala kwaye ziyacetyiswa zazo ulungelelwaniso olukhulu phambi kwezinye iintlobo. Olona nyango lukhethekileyo olufunekayo yitravel entle, kuba le ntlanzi izakuzama ukungcwaba kuyo kwaye ukuba ayinako, ayizukuphumla, kwaye iya kuba noxinzelelo.
Ngenye yezona zidumileyo kwaye zacetyiswa kwabo bantu baqala kwihlabathi leentlanzi kunye neendawo zasemanzini. Ifuna izityalo kunye nezinye izinto zokuhombisa kwitanki lokuloba ukuze lisetyenziswe njengendawo yokufihla.
Njengoko igama labo lisitsho, zihlala zinemibala eyahlukeneyo kwaye ubukhulu bazo abudluli kwi-12 cm.
Ezi ntlanzi zetropiki ziyakwazi ukuphila kwiindawo ezahlukeneyo kwaye ziqhelana phantse nayo nayiphi na indawo yokuhlala. Ingxaki ekuphela kwayo ezi ntlanzi zihlala zinazo, kukuzala kwayo ngokukhawuleza. Ukuba awulumkanga, kunokwenzeka ukuba ii-cichlids ziya kuthi ekugqibeleni zilawule i-aquarium yakho, ngethamsanqa, unokulawula i-ovulation kwezi ntlanzi ngobushushu bamanzi.
Yintlanzi ekulula ukuyinyamekela nangona ifuna iitanki zentlanzi Ubuncinane beelitha ezingama-70. Zilungile nangona amadoda enokuba yindawo engaphezulu.
Ezi ntlanzi zetropiki zinokuba mbala kakhulu, kwaye ungazifumana kumakhulu emibala, kunye nokudityaniswa.
Le ntlanzi inokuba nemibala eyahlukeneyo, kwaye kunzima ukufumana enye yezi inombala omnye kuphela ezikalini zayo. Kuyacetyiswa ukuba Itanki leentlanzi lineelitha ezingama-20 zamanzi.
Ngezi ntlanzi kunye nokulawula ubushushu obufanelekileyo, unokuba ne-aquarium egcwele iintlanzi ezikweleenjiko kwaye inemibala emihle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Amaqondo obushushu afanelekileyo kwintlanzi yetropiki yasemanzini